कुन देशबाट कति नेपाली स्वदेश फर्किदै ? « हाम्रो ईकोनोमी
कुन देशबाट कति नेपाली स्वदेश फर्किदै ?
नेपाल एअरलाइन्सको चार्टर्ड जहाज आज साउदीको दमामबाट १५४ नेपाली लिएर आउँदैछ । हिमालय एअरलाइन्सले यूएईमा समस्यामा परेका १५४ जना लिएर आउने तालिका रहेको जनाइएको छ ।
यस्तै आजै नेपाल एअरलाइन्सले साउदीकै जेद्दाबाट पनि समस्यामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउँदैछ । विमानस्थलले फर्कनेको संख्या भने खुलाएको छैन ।
आजै कुवेतबाट पनि झण्डै १६० जना फर्कन सक्ने बताइएको छ । कुवेतले जजिरा एअरको चार्टर्ड जहाजमार्फत आफ्नै खर्चमा त्यहाँ समस्यामा परेका नेपाली काठमाडौंसम्म ल्याई दिइरहेको छ । इस्तानबुलबाट आज टर्किस् एअरलाइन्सको चार्टर्ड जहाजमार्फत २८० जना फर्कने विमानस्थलले जनाएको छ । यो जहाजले फर्कंदा पनि नेपालबाट २८० जना नै लिएर जाने तालिका तय भएको छ ।
यता कुवेतमा समस्यामा रहेका नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि पनि चार्टर्ड उडान हुने भएको छ । यसअघि त्यहाँ आममाफीमा सहभागीलाई कुवेत सरकार आफैंले निःशुल्क ल्याई दिएको थियो । आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कने नेपालीका लागि भने नेपाल एअरलाइन्सले पहिलो चार्टर्ड उडान भर्दैैछ ।